Actorylọ ọrụ Nkwado Knee - Ndị na-eme ka ndị na - akwado China, ndị na - enye ha
Ọkpụkpụ dị mfe imerụ ahụ n’ihi ebumnuche dịgasị iche, na ọkpụkpụ na-adịkarị mfe mmebi n’afọ, yabụ ekwesịrị ichebe ikpere. Onye na-echebe silicone mgbakwunye ikpere na-enye nkwonkwo ikpere aka ma na-akwalite mgbasa ọbara; mgbanaka silicone kechie 360 ​​° gburugburu abụọ nke nkwonkwo ikpere iji nye nkwado zuru oke maka nkwonkwo ikpere; ihe nchebe ikpere adịghị mfe ịkwaga.
Ihe nkedo Patella
Ihe mkpuchi patella bụ ụdị nke na-echebe egwuregwu maka nkwonkwo ikpere. Volumeda olu adịghị oke dịka nkwado ikpere, ọ dịkwa mma iji eyi. Isi ọrụ dị na eriri patella bụ ichebe ligamenti patellar, kwụsie patella, belata iyi nke meniscus, yana nwee ezigbo nchebe na nkwonkwo. Mgbu ahụ butere na-enwekwa ezigbo ihe enyemaka.
Ihe aka naịị naịị nwere akwa iku ume mana ọ na - enyekwa mgbakwụnye dị mma n'otu oge ahụ, a na - enwetakwa akwa eriri maka nkwado ka mma. Ma mmega ahụ siri ike, ije ije, mkpagharị, ịgba ọsọ, egwuregwu ma ọ bụ dịka ikpere ikpere ikpere, iji mee ihe nkwado a ikpere ga - echebe ikpere gị site na mmerụ ahụ ma ọ bụ ihe mgbu iji nwee obi ụtọ ịkwaga ma ọ bụ mgbanwe nkwonkwo.
Ebere na nke dị gịrịgịrị, egwuregwu na-enye ume ndụ dị mma, dị mma iyi, dị mma maka egwuregwu ndị siri ike dị ka basketball, n'otu oge ahụ, ọ nwekwara nkwado dị mma na akwa mkpuchi na ọrụ mgbochi, dị mfe ma dị mfe eyi, naanị yikwasị, mba ọzọ usoro, na-agbanwe na akwa nwere ezigbo mmachi, ọ na-depụtara usoro nke ụkwụ ọma nke ọma, nke na-atọ ụtọ.
7mm neoprene ikpere aka
A na-eji uwe mpe mpe mpe mpe mwepụta 7mm eme ihe na neo Loose na naịlọn, ihe iku ume na akwa akwa nwere ike inye gị nkwado dị mma ma nye gị ikpere. Anyị nwere ike ịhazi gị ụcha na nha, a na-anabatakwa akara ọkọlọtọ. A na-etinye aka uwe ikpere maka nchebe egwuregwu, yana ndị okenye na ụmụaka.
Yiri nkwado ikpere a iji jide n'aka na ikpere agaghị adị mmerụ ahụ. Ọ bụrụ na agbatị ya mgbe mmerụ ahụ gasịrị, ọ nwere ike belata ikpere ikpere iji chebe nkwonkwo ikpere. Ọ nwere ngwakọta kachasị mma nke ịdị mma, njupụta na ọkpụrụkpụ nke ihe neoprene na-enweta ọrụ na-arụ ọrụ dị ukwuu na mmetụta na-enweghị oke na-enye ohere maka mmegharị ngagharị zuru oke!
Bamboo unyi n'ikpere nkwado
Bamboo unyi n'ikpere nkwado bụ ngwaahịa sitere na akwa nke nwere eriri ngịrọ achara. Ihe mejuputara ya nwekwara silk latx, yarn owu, spandex, wdg. Ihe owuwu puru iche nke ikpo oku achara na eme ka oru ngo nke achara unyi 100%. Ọ bụ nhọrọ kachasị mma maka ntinye mmiri na nchebe oyi iji chebe nkwonkwo ikpere.